Tag: elekọta mmadụ ahịa | Martech Zone
Tag: ahia ahia
Nke a bụ ihe ọzọ nnukwu infographic si CJG Digital Marketing, 10 Social Media Marketing Trends ka Lelee a 2015. Ọ dị oke egwu inyocha ọdịnaya gị, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ekwentị mkpanaaka iji chọpụta ebe ị nwere ike ịnwe ụfọdụ oghere. 10 Social Media Marketing na-ewu ewu iji Lelee 2015 Ahịa Ahịa na-aga n'ihu na-enwetawanye mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Real Time Social Media Marketing ga-abụ a buzzword. Audio na Video ga-achịkwa mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Enwere mgbanwe na-aga n'ihu, na-agbanwe agbanwe
Ndị Ahịa Ọdịnaya: Kwụsị ellingre + Malite Ntị
Tọzdee, Disemba 4, 2014 Kelsey Cox
Ọ naghị arụ ọrụ dị mfe iwepụta ọdịnaya ndị mmadụ chọrọ ịgụ, ọkachasị ebe ọdịnaya bụ otu mpaghara ebe mma na-adịkarị karịa nke ukwuu. Site na ndị na-azụ ahịa juputara na ọdịnaya dị ukwuu kwa ụbọchị kedu ka ị ga - esi mee ka nke gị dị elu karịa ndị ọzọ? Iwere oge iji gee ndị ahịa gị ntị ga-enyere gị aka ịmepụta ọdịnaya nke na-adabara ha. Ọ bụ ezie na 26% nke ndị ahịa na-eji nzaghachi ndị ahịa iji kọwaa ọdịnaya
LoopFuse na-enye azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa (B2B) azụmaahịa nke na-agwa gị onye na-eleta weebụsaịtị gị, na-enyere gị aka ijide ozi ha, na-ezipụ ozi ịntanetị na-azụlite, na-etinye ohere kacha mma, ma na-etinye ya niile n'ime usoro Njikwa Mmekọrịta Ndị Ahịa (CRM) gị. na akuko di elu. N'otu oge, ị ga-ahụ nduzi ndị tozuru etozu, usoro ịgba ahịa dị mkpụmkpụ, ịbawanye ahịa na ire ere, yana akpaaka nke ọrụ aka na ugboro ugboro. Na nkenke, anyị na-enyere gị aka
Na Tọzdee, Septemba 10, 2013 Na Tọzdee, Septemba 10, 2013 Douglas Karr
Echere m na Mgbasa Ozi MDG na-anwa ime ka ụfọdụ n'ime anyị tụfuo gasket mgbe anyị gụrụ aha vidiyo vidiyo a ha tinyere, Social vs Search Smackdown: A Battle of Internet Marketing Titans. Ma, lee, ha abịakwara ma anya ha gwụchaa vidiyo ahụ. Mgbe anyị malitere ụlọ ọrụ anyị, ụlọ ọrụ ahụ jupụtara na ụlọ ọrụ pụrụ iche. N'ezie, ndụmọdụ mbụ m nyere site n'aka onye nwe ụlọ ọrụ bụ
Mgbaàmà: Kpọrịta site na SMS, Email, Twitter na Facebook
Fraịde, Septemba 6, 2013 Mọnde, Jenụwarị 16, 2017 Douglas Karr
Ihe ịrịba ama bụ ikpo okwu agbakwunyere maka azụmahịa iji jikwaa, nyochaa ma tụọ mbọ ahịa ha gafere na mkpanaka, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, email na ntanetị weebụ. Ihu ọma, a CRM + mobile ahịa + email ahịa + na-elekọta mmadụ media management. Anyị kwenyere na ọrụ marketer ahụ na-esiwanye ike n'ihi mmụba nke ọwa ahịa ngwa ngwa, yana ngwaọrụ iji jikwaa ha. Sọftụwia anyị na-enyere ụlọ ọrụ aka ijikwa mbọ azụmaahịa ha n'otu ebe etiti mgbe ha na-enye a